Kalonzo Musyoka oo loo sharaxay in uu u tartamo xilka madaxweynaha | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Kalonzo Musyoka oo loo sharaxay in uu u tartamo xilka madaxweynaha
Xisbiga WIPER ee ka tirsan Isbahaysiga Mucaaradka ah ee CORD ayaa ku dhawaaqay in ay hogaamiyahooda Kalonzo Muyoka u sharexeen inuu u tartamo xilka madaxweynaha marka la gaaro doorashada guud ee dalka ka dhici doonta sanadka 2017-ka.
Xog hayaha guud ee WIPER ahna Seneterka Countiga Mombasa Hassan Omar ayaa maalintii Jimcada arrintaan uga dhawaaqay kulan ay ka qeyb galeen hogaamiyeyaasha CORD Raila Odinga, Kalonzo Musyoka iyo Moses Wetangula.
Kulankaasi oo ay masuuliyiinta garabka Mucaaradka uga hadlayeen istiraatiijiyaddooda u diyaar garowga doorashada ayaa ka dhacay Hotel ku yaalla magaalada Machakos.
Seneter Hassan ayaa sheegay in xusbigooda ay si kalsooni ah Mr Musyoka ugu caleema saareen inuu u loollamo xilka ugu sarreeya dalka, waxaana uu dhamaan taageerayaasha mucaaradka ugu baaqay in ay taageeraan Kalonzo.
Arrintaan ayaa imaaneysa xili Raysul wasaarihii hore ee dalka Raila Odinga oo ka tirsan CORD uu isagana u hanqal taagayo kursiga madaxweynaha.
Sidoo kale hogaamiyaha Xisbiga Ford Kenya Moses Wetangula ayaa qudhiisa isha ku haya u tartamidda xilkaasi ay quud dareynayaan saaxiibaddiisa kale ee CORD.
In kasta oo ay muuqato kala qeybsanaan hopgaamiyeyaasha ay ku wajahayaan arrintaan ayaa hadana madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalka Kalonzo Musyoka uu sheegay in ay masuuliyiinta CORD yeelan doonaan kulan ay ku xaliyaan xiisaddaasi.